Kursigii xildhibaannimo ee Sanbaloolshe oo loo tartami doono – Kalfadhi
Guddiga Madaxa-bannaan ee Doorashooyinka Qaranka ayaa maanta sheegay in dhawaan loo tartami doono kursigii xildhibaannimo ee taliyihii hore ee Nabad-sugidda Qaranka, Cabdulaahi Maxamed Cali Sanbaloolshe.
Guddoomiyaha Guddiga Madaxa-bannaan ee Doorashooyinka Qaranka, Xaliimo Ibraahim Ismaacil oo magaalada Jowhar maanta kula kulantay madaxweynaha Hirshabeelle, Maxamed Cabdi Waare iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa Cali Guudlaawe ayaa kala hadashay kursiga deegaan-doorashadiisu ay tahay Jowhar ee uu banneeyay Sanbaloolshe.
Dastuurka Soomaaliya ayaa qoraya in xilka xildhibaannimada uu mas’uulku weynayo haddii uu qabto xil aan wasiir ahayn.
Marwo Xaliimo oo warbaahinta kula hadashay Jowhar ayaa tilmaantay in laga billaabo maanta ay u tartamidda kursiga u furan tahay murashaxiinta doonaya, ayna isa soo diiwaangalin karaan.
Sharuudaha Guddiga ay soo bandhigeen waxaa ka mid ah:
1-In murashaxa da’diisa ay ka weyn tahay 25-sano.
2-Inuu iska bixiyo lacagta isdiiwaangalinta oo gaareysa $5,000 (haddii ay haween tahayna $2,500).
3-Inuu yahay muwaadin Soomaali ah oo caafimaad qaba.
4-In kursiga ay u tartami karaan kaliya beesha iska leh, gaar ahaan lafta kursigaasi banneysay.
Guddoomiyaha ayaa sheegtay in sharuudo kale ay soo bandhigi doonaan oo murashaxa laga doonayo in uu ka soo baxo.
Xilliga isdiiwaangalinta murashaxiinta ayay tilmaamtay inay ku egtahay 10-ka bishan Jannaayo.
Kuraasta ka bannaan Golaha Shacabka waxaa ka mid ah kursigii Wasiirkii hore ee Howlaha guud, Marxuum Cabaas Cabdullaahi Sheekh Siraaji oo lagu dilay Muqdisho bishii Maarso ee sanadkii hore.
Dhowr jeer ayuu Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Sheekh Cusmaan (Jawaari) ku taliyay in si degdeg ah loo buuxiyo kuraasta bannaan.